ကိုရီးယားသွားချင်နေတဲ့ KPopper လေးတွေကို ခေါ်သွားရမယ့်ကိုရီးယားစာစစ်စစ်ဆိုင်လေး
25 Sep 2018 . 5:41 PM
ကိုရီးယားစာကို ကိုရီးယားစစ်စစ်တွေစားတဲ့ အရသာအတိုင်း အထာကျကျစားလို့ရပြီဆို…?
ကျွန်တော့်မှာ အိပ်မက်တစ်ခုရှိတယ်။ တစ်နေ့ကိုရီးယားရောက်ကို ရောက်ရမယ်ဆိုတဲ့ KPopper လေးတွေ ကိုရီးယားမရောက်ခင် ကိုရီးယားစာတွေနဲ့ ရင်းနှီးထားအောင် သွားကိုသွားသင့်တဲ့ စားသောက်ဆိုင်လေး အခရာက ဒီတစ်ပတ်ရောက်ခဲ့တယ်။
ကိုရီးယားလူမျိုးတွေဆိုတာ သူတို့နိုင်ငံကို အစားအစာနဲ့တမျိုး၊ ရုပ်ရှင်စီးရီး ဇာတ်လမ်းတွဲတွေနဲ့ တဖုံ၊ လည်စရာပတ်စရာ နေရာလှလှတွေနဲ့ တသွယ် လာလည်ချင်အောင် Promote လုပ်တဲ့နေရာမှာ သိပ်တော်တယ် ပြောရမယ်။ သူတို့စားပြတဲ့ ငါးအူချောင်းကြီးတွေ၊ နီရဲရဲ တော့ပုကီတွေ၊ ထမင်းလိပ်တွေဆိုတာ TV ထဲကြည့်ရင်းကို သွားရေကျခဲ့ရတာမို့လား?
ခုတော့ ရန်ကုန်မှာ ကိုရီးယားဆိုင်တွေမှိုလိုပေါက်လာပြီ။ ငါးအူချောင်းဆိုတာကလည်း မမြင်ချင်မှအဆုံး နေရာတိုင်းမှာရလာပြီ။ ဒါပေမယ့် တကယ့် ကိုရီးယားကလာတဲ့ပစ္စည်းစစ်စစ်တွေ၊ ကုန်ကြမ်းတွေနဲ့လုပ်ထားတဲ့ အစားအစာတွေကို ရတဲ့ ဒီဆိုင်လေးကတော့ ဂေါ်တယ်ပြောရမယ်။
ဆိုင်နာမည်လေးက Sarangchae တဲ့။ ကိုရီးယားလိုဆို နင့်ကိုငါချစ်တယ်ပေါ့လေ။ ဝင်ဝင်ချင်းကို ရည်းစားစကားပြောခံရသလိုပဲ။ FA လေးတွေ ပိုသွားသင့်ပါတယ်။ (စတာပါ…စတာပါ)
ဒီဆိုင်လေးက ကိုရီးယားအစားအသောက်တွေရဲ့ပင်မ၊ ငါးအူချောင်းနဲ့ တော့ပုကီတို့ရဲ့ မူလပထမအစ Pro Mart ကနေ ဖွင့်ထားတာဆိုပဲ။
ဆိုင်ကလေးက ရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေး။ အဝင်ဝမှာ ပန်းအိုးလှလှကြီးတွေနဲ့ အလှဆင်ထားတယ်။ အပြင်အဆင်အနေအထား တော်တော်ကို သန့်ရှင်းတယ်။ နံရံထောင့်မှာ Projector ကြီးနဲ့ ကိုရီးယားသီချင်းတွေ တနေကုန်ဖွင့်တယ်။ အလင်းရောင်လည်း ကောင်းတယ်။ လူငယ်လေးတွေ ထိုင်လို့သိပ်ကောင်းတဲ့နေရာလေးပဲ။ KPopper မလေးတွေ Shopping ထွက်ရင်း ထိုင်လို့ကြိုက်ကြမှာ သေချာတယ်။
ကိုရီးယားစာတွေထဲကမှ ဒီမှာ နာမည်ကြီးနဲ့ အစားအစာတော်တော်များများကို ရောင်းတယ်။ တော့ပုကီဗန်းကြီးချထားတာ စားချင်စရာ။ ငါးအူချောင်းကတော့ မူလဘူတအရသာ တစ်ချောင်း ၇၀၀ နဲ့ စားကောင်းဆဲပဲ။
ထမင်းလိပ်၊ ကြက်ဥထမင်းလိပ်၊ ကျောက်အိုးပူထမင်းသုပ်၊ ခေါက်ဆွဲအေး၊ ကင်ချီစတူး၊ ဝက်သားဘူဂိုဂီ၊ အမဲသားဘူဂိုဂီ၊ တခြား ကိုရီးယားစာ စုံပလုံစိစိရပါသတဲ့။
ကိုရီးယားသစ်သီးဗီနီဂါဖျော်ရည်လေးတွေ၊အပူအေးစက်တွေနဲ့ ထည့်ပေးတဲ့ကော်ဖီမွှေးမွှေးတွေရတယ်။ ရောင်စုံကိုရီးယားရေခဲချောင်းတွေဆိုတာ စားချင်စရာ ကိုယ့်မျက်စေ့ရှေ့တင်ပဲ။
ချဉ်စပ်ကိုမှ ကင်ချီအချဉ်ပိုကဲတယ်။ ကြက်၊ ဝက် ၂မျိုးရတယ်။ ဝက်ကပိုကောင်းတယ်။ ပဲပြားတုံးလေးတွေနဲ့ သောက်ကောင်းတယ်။ လောလော လောလောသောက်ချလို့ သီးရင်တော့ အတော်ဆိုးမယ့်အမျိုး။ အိုးလေးသေးတာကိုတော့ စိတ်မကောင်းဆုံးပဲ။ ကိုရီးယား အရသာစစ်စစ်ဆိုတော့လည်း ၃၅၀၀ နဲ့ ဖြေလိုက်ပါတယ်လေ။
ကြက်ဥ Nude လိပ်တဲ့
ကြက်ဥလိပ်တောင်မှ Sexy ဆန်လာပြီ။ တမျိုးမထင်နဲ့ဗျို့။ သူ့ Nude သဘောက ကြက်ဥချည်း လိပ်ထားမယ့်ပုံပေါ့နော်။ ရောက်ချလာတော့ ထမင်းခပ်များများနဲ့ ကြက်ဥလိပ်က အလယ်လေးမှာ။ကြက်ဥထမင်းလိပ်ဆိုပိုမှန်တယ်။ နှမ်းနံ့မွှေးမွှေး စေးစေးလေးနဲ့ စားလို့ကတော့ကောင်းသား။ သူက ၂၅၀၀ တဲ့။ ဈေးတော့ကြီးတယ်။
ကိုရီးယားကားတွေထဲမှာ ခနခနတွေ့ရတယ်လေ။ ကြက်ဥအနှစ်စိမ်းစိမ်းလေးကို ဖောက်ပြီး ထမင်းပျော့ပျော့လေးနဲ့၊ ကိုရီးယားငရုတ်နှစ်ရယ်၊ ပဲပင်ပေါက်၊ ဂေါ်ဖီ၊ နှမ်း အဆာပလာရောနှယ်ဖတ်စားရတာပေါ့။ စားရတာတော့ ချိုတိုတို၊ ပေါ့တော့တော့လေး။ တမျိုးတဖုံ စားလို့ကောင်းသား။ ကြိုက်တော့ မကြိုက်မိဘူး။ ဒါလေးက ၃၅၀၀။
သောက်စရာက အသီးဖျော်ရည်ကိုမှ သစ်သီးဗီနီဂါတဲ့ ခပ်ချဉ်ချဉ်လေးတွေပဲ။ ချဉ်စူးနေပေမယ့် သောက်လို့ကောင်းတယ်။ တစ်ခွက် ၇၀၀ တဲ့။
ဒါကတော့ စိတ်ချမ်းသာတယ်။ ဝန်ထမ်းနည်းပေမယ့် သဘောကောင်းတယ်။ သေချာရှင်းပြတယ်။ အမှတ်ပြည့်ပေးပါတယ်။
စံရိပ်ငြိမ် ဂမုန်းပွင့် အပေါ်ဆုံးထပ်မှာဆိုတော့ Parking အတွက် ခက်မယ်ထင်တာပဲ။ ကားနဲ့ဆို ၆၅ ၊ ၂၁၊ ၃၀ ၊ ၄၁ တို့ရောက်တယ်။ အဓိကကတော့ ထိုင်လို့ကောင်းတယ်။ ရုပ်ရှင်ရုံရှိတဲ့အထပ်ဆိုတော့ ရုပ်ရှင်မကြည့်ခင် အေးဆေးထိုင်စားလို့ရတယ်။
ကိုရီးယားမရောက်ခင် ကိုရီးယားစာစစ်စစ်ကဒီလိုပါလားဆိုတာ သိဖို့ဆိုရင်တော့ တစ်ခေါက်လောက် သွားကိုစားကြည့်သင့်ပါတယ်လို့။ မရောက်သွားဖူးလို့ ပြောလို့မရဘူးလေနော့။ ဒါမျိုးက စားကျင့်ရှိထားနိုင်ကာမှ။
ကဲ…လခထုတ်ပြီဆို၊ ပိတ်ရက်ရောက်ပြီဆိုမှတ်မှတ်ရရ ဒိတ်လှလှလုပ်ရင်း စံရိပ်ငြိမ်ဂမုန်းပွင့်များ ရောက်ခဲ့ရင်တော့ ဒီကိုရီးယားဆိုင်လေးကိုလည်း ရွေးချယ်ထိုင်ကြည့်သင့်ပါကြောင်း။
ကိုရီးယားသှားခငျြနတေဲ့ KPopper လေးတွေကို ချေါသှားရမယျ့ကိုရီးယားစာစဈစဈဆိုငျလေး
ကိုရီးယားစာကို ကိုရီးယားစဈစဈတှစေားတဲ့ အရသာအတိုငျး အထာကကြစြားလို့ရပွီဆို…?
ကြှနျတေျာ့မှာ အိပျမကျတဈခုရှိတယျ။ တဈနကေို့ရီးယားရောကျကို ရောကျရမယျဆိုတဲ့ KPopper လေးတှေ ကိုရီးယားမရောကျခငျ ကိုရီးယားစာတှနေဲ့ ရငျးနှီးထားအောငျ သှားကိုသှားသငျ့တဲ့ စားသောကျဆိုငျလေး အခရာက ဒီတဈပတျရောကျခဲ့တယျ။
ကိုရီးယားလူမြိုးတှဆေိုတာ သူတို့နိုငျငံကို အစားအစာနဲ့တမြိုး၊ ရုပျရှငျစီးရီး ဇာတျလမျးတှဲတှနေဲ့ တဖုံ၊ လညျစရာပတျစရာ နရောလှလှတှနေဲ့ တသှယျ လာလညျခငျြအောငျ Promote လုပျတဲ့နရောမှာ သိပျတျောတယျ ပွောရမယျ။ သူတို့စားပွတဲ့ ငါးအူခြောငျးကွီးတှေ၊ နီရဲရဲ တော့ပုကီတှေ၊ ထမငျးလိပျတှဆေိုတာ TV ထဲကွညျ့ရငျးကို သှားရကေခြဲ့ရတာမို့လား?
ခုတော့ ရနျကုနျမှာ ကိုရီးယားဆိုငျတှမှေိုလိုပေါကျလာပွီ။ ငါးအူခြောငျးဆိုတာကလညျး မမွငျခငျြမှအဆုံး နရောတိုငျးမှာရလာပွီ။ ဒါပမေယျ့ တကယျ့ ကိုရီးယားကလာတဲ့ပစ်စညျးစဈစဈတှေ၊ ကုနျကွမျးတှနေဲ့လုပျထားတဲ့ အစားအစာတှကေို ရတဲ့ ဒီဆိုငျလေးကတော့ ဂျေါတယျပွောရမယျ။
ဆိုငျနာမညျလေးက Sarangchae တဲ့။ ကိုရီးယားလိုဆို နငျ့ကိုငါခဈြတယျပေါ့လေ။ ဝငျဝငျခငျြးကို ရညျးစားစကားပွောခံရသလိုပဲ။ FA လေးတှေ ပိုသှားသငျ့ပါတယျ။ (စတာပါ…စတာပါ)
ဒီဆိုငျလေးက ကိုရီးယားအစားအသောကျတှရေဲ့ပငျမ၊ ငါးအူခြောငျးနဲ့ တော့ပုကီတို့ရဲ့ မူလပထမအစ Pro Mart ကနေ ဖှငျ့ထားတာဆိုပဲ။
ဆိုငျကလေးက ရှငျးရှငျးလငျးလငျးလေး။ အဝငျဝမှာ ပနျးအိုးလှလှကွီးတှနေဲ့ အလှဆငျထားတယျ။ အပွငျအဆငျအနအေထား တျောတျောကို သနျ့ရှငျးတယျ။ နံရံထောငျ့မှာ Projector ကွီးနဲ့ ကိုရီးယားသီခငျြးတှေ တနကေုနျဖှငျ့တယျ။ အလငျးရောငျလညျး ကောငျးတယျ။ လူငယျလေးတှေ ထိုငျလို့သိပျကောငျးတဲ့နရောလေးပဲ။ KPopper မလေးတှေ Shopping ထှကျရငျး ထိုငျလို့ကွိုကျကွမှာ သခြောတယျ။
ကိုရီးယားစာတှထေဲကမှ ဒီမှာ နာမညျကွီးနဲ့ အစားအစာတျောတျောမြားမြားကို ရောငျးတယျ။ တော့ပုကီဗနျးကွီးခထြားတာ စားခငျြစရာ။ ငါးအူခြောငျးကတော့ မူလဘူတအရသာ တဈခြောငျး ၇၀၀ နဲ့ စားကောငျးဆဲပဲ။
ထမငျးလိပျ၊ ကွကျဥထမငျးလိပျ၊ ကြောကျအိုးပူထမငျးသုပျ၊ ခေါကျဆှဲအေး၊ ကငျခြီစတူး၊ ဝကျသားဘူဂိုဂီ၊ အမဲသားဘူဂိုဂီ၊ တခွား ကိုရီးယားစာ စုံပလုံစိစိရပါသတဲ့။
ကိုရီးယားသဈသီးဗီနီဂါဖြျောရညျလေးတှေ၊အပူအေးစကျတှနေဲ့ ထညျ့ပေးတဲ့ကျောဖီမှေးမှေးတှရေတယျ။ ရောငျစုံကိုရီးယားရခေဲခြောငျးတှဆေိုတာ စားခငျြစရာ ကိုယျ့မကျြစရှေ့တေ့ငျပဲ။
ခဉျြစပျကိုမှ ကငျခြီအခဉျြပိုကဲတယျ။ ကွကျ၊ ဝကျ ၂မြိုးရတယျ။ ဝကျကပိုကောငျးတယျ။ ပဲပွားတုံးလေးတှနေဲ့ သောကျကောငျးတယျ။ လောလော လောလောသောကျခလြို့ သီးရငျတော့ အတျောဆိုးမယျ့အမြိုး။ အိုးလေးသေးတာကိုတော့ စိတျမကောငျးဆုံးပဲ။ ကိုရီးယား အရသာစဈစဈဆိုတော့လညျး ၃၅၀၀ နဲ့ ဖွလေိုကျပါတယျလေ။
ကွကျဥ Nude လိပျတဲ့
ကွကျဥလိပျတောငျမှ Sexy ဆနျလာပွီ။ တမြိုးမထငျနဲ့ဗြို့။ သူ့ Nude သဘောက ကွကျဥခညျြး လိပျထားမယျ့ပုံပေါ့နျော။ ရောကျခလြာတော့ ထမငျးခပျမြားမြားနဲ့ ကွကျဥလိပျက အလယျလေးမှာ။ကွကျဥထမငျးလိပျဆိုပိုမှနျတယျ။ နှမျးနံ့မှေးမှေး စေးစေးလေးနဲ့ စားလို့ကတော့ကောငျးသား။ သူက ၂၅၀၀ တဲ့။ ဈေးတော့ကွီးတယျ။
ကိုရီးယားကားတှထေဲမှာ ခနခနတှရေ့တယျလေ။ ကွကျဥအနှဈစိမျးစိမျးလေးကို ဖောကျပွီး ထမငျးပြော့ပြော့လေးနဲ့၊ ကိုရီးယားငရုတျနှဈရယျ၊ ပဲပငျပေါကျ၊ ဂျေါဖီ၊ နှမျး အဆာပလာရောနှယျဖတျစားရတာပေါ့။ စားရတာတော့ ခြိုတိုတို၊ ပေါ့တော့တော့လေး။ တမြိုးတဖုံ စားလို့ကောငျးသား။ ကွိုကျတော့ မကွိုကျမိဘူး။ ဒါလေးက ၃၅၀၀။
သောကျစရာက အသီးဖြျောရညျကိုမှ သဈသီးဗီနီဂါတဲ့ ခပျခဉျြခဉျြလေးတှပေဲ။ ခဉျြစူးနပေမေယျ့ သောကျလို့ကောငျးတယျ။ တဈခှကျ ၇၀၀ တဲ့။
ဒါကတော့ စိတျခမျြးသာတယျ။ ဝနျထမျးနညျးပမေယျ့ သဘောကောငျးတယျ။ သခြောရှငျးပွတယျ။ အမှတျပွညျ့ပေးပါတယျ။
စံရိပျငွိမျ ဂမုနျးပှငျ့ အပျေါဆုံးထပျမှာဆိုတော့ Parking အတှကျ ခကျမယျထငျတာပဲ။ ကားနဲ့ဆို ၆၅ ၊ ၂၁၊ ၃၀ ၊ ၄၁ တို့ရောကျတယျ။ အဓိကကတော့ ထိုငျလို့ကောငျးတယျ။ ရုပျရှငျရုံရှိတဲ့အထပျဆိုတော့ ရုပျရှငျမကွညျ့ခငျ အေးဆေးထိုငျစားလို့ရတယျ။
ကိုရီးယားမရောကျခငျ ကိုရီးယားစာစဈစဈကဒီလိုပါလားဆိုတာ သိဖို့ဆိုရငျတော့ တဈခေါကျလောကျ သှားကိုစားကွညျ့သငျ့ပါတယျလို့။ မရောကျသှားဖူးလို့ ပွောလို့မရဘူးလနေော့။ ဒါမြိုးက စားကငျြ့ရှိထားနိုငျကာမှ။
ကဲ…လခထုတျပွီဆို၊ ပိတျရကျရောကျပွီဆိုမှတျမှတျရရ ဒိတျလှလှလုပျရငျး စံရိပျငွိမျဂမုနျးပှငျ့မြား ရောကျခဲ့ရငျတော့ ဒီကိုရီးယားဆိုငျလေးကိုလညျး ရှေးခယျြထိုငျကွညျ့သငျ့ပါကွောငျး။